eNasha.com - गए रामप्रसाद, आए रेग्मी
गए रामप्रसाद, आए रेग्मी
नेपाल प्रतिलिपि अधिकारका लागि स्थापनाकालदेखि नै सर्जकहरुको हकहितका लड्ने योद्धा कहलिएका रामप्रसाद भट्टराई नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सरुवा भएका छन् ।
उनको ठाउँमा अहिले जन्मजय रेग्मी प्रतिलिपि अधिकारको रजिष्ट्रार नियुक्त भएका छन् । रेग्मी यसअघि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पर्यटन प्रवर्द्धन महाशाखामा कार्यरत थिए ।
रामप्रसाद भट्टराई चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय योजना महाशाखामा पुर्‍याइएका छन् ।
भट्टराई प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएयता नेपाली प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण, सम्वर्द्धनका लागि लागिपरेका व्यक्तित्वका रुपमा चिनिएका थिए । उनकै कार्यकालमा गीतकार रत्नशमशेर थापाको अध्यक्षतामा सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजको गठन भएको थियो ।
पाँच वर्षको उनको कार्यकालमा उनलाई सबैभन्दा अचम्म लागेको चाहिँ यहाँका सर्जकहरुको अनौठो मौनता नै हो । तीन वर्षभन्दा बढी अध्ययन भइसकेको रोयल्टी सङ्कलन समाजको स्थापनाका लागि गायक, गायिका, सङ्गीतकार, गीतकार तथा यससम्बद्ध अन्य सर्जकहरुले रोयल्टी सङ्कलन समाज गठनका लागि चासो नदेखाएको भनी उनी असन्तुष्ट देखिएका थिए ।
यता नयाँ रजिष्ट्रार रेग्मीको प्रवेशपछि भदौदेखि नयाँ किसिमका प्रतिलिपिअधिकारसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरुको थालनी गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
क्षेत्रीयस्तरका गोष्ठीको आयोजन, स्कूल तथा कलेजस्तरीय विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजनतर्फ कार्यालयले योजना बुनिरहेको बताइएको छ । अब हेर्नुछ, दिनदिनै अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको अवस्थामा नयाँ रजिष्ट्रारले आफ्नो उपस्थितिलाई कति दह्रो रुपमा स्थापना गराउने हुन् !
पूर्व रजिष्ट्रार रामप्रसाद भट्टराई (माथिको तश्बीरमा पनि उनै)
ट्रयाक बाहिर सङ्गीतकार लुकेका कुरा रिलिज समुद्रपार नेपाली तारा क्या बात ! कीर्तिमान तातोपीरो अवार्ड उपलब्धि भिडन्त विचार पेज थ्री गायक गायिका प्रेम र विवाह रुचि कन्सर्ट हल्ला